I-Semalt Expert ichaza iintlobo ezi-6 ezibalulekileyo zeeO Tools ngo-2017
Ungasebenzisa izixhobo ezahlukahlukeneyo ukukhulisa ukusetyenziswa kocwangciso lwakho lwe-digital marketing . Ezi zixhobo zingakunceda uhlaziye umgangatho womxholo wakho, qulunqa isicwangciso sokuthengisa kwaye uphathe izixhumanisi phakathi kwezinye izinto.
uFrank Abagnale, uMphathi weNtengo yoMthengi we-12 (Semalt , ukhangele apha kwiintlobo zezixhobo ze-SEO ozifuna ukuqhuba iimkhankaso zokuthengisa ngokuphumelelayo ngo-2017.
Iintlobo zezixhobo ze-SEO
Kukho iintlobo ezintandathu eziphambili zezixhobo ze-SEO ongayisebenzisa, ezininzi zenza imisebenzi emininzi. Ezinye zikhululekile. Kufuneka uhlawule abanye, kwaye abanye bangabalwa njengezixhobo ze-SEO ze-freemium. Bonke badlala indima ekuphuculeni ukuthengisa kwakho, ngaba:
1. Izixhobo ze-SEO zobugcisa
Oku kunceda uhlolisise umva wokugqibela wesayithi lakho, ubone indlela osebenza ngayo kwaye ufumanisa nayiphi na imiba ofuna ukuyilungisa. Izixhobo zobuchwepheshe ziza kuluhlu olubanzi, kwaye akukho nanye ithuluzi lobugcisa elizungezile ukukunceda wenze indawo yakho ibe nobungane.
Izixhobo ze-SEO zobuchwephesha zingenza uphicotho-zincwadi ze-SEO, uhlalutyo lwekhonkco lobugcisa, iimvavanyo zephepha lewebhu, iikhowudi zeempendulo ze-header kunye ne-XML yokuhlola isitifiketi.
2. Izigaba zeZiko
Njengoko uceba isicwangciso sakho sokuthengisa, kufuneka ukwazi apho ubeka khona kwii-metrics ezithile. Yiyo apho izixhobo zokubeka izikhundla zingena kuzo. Zikubonisa apho isayithi lakho langoku linamanani amanani amaninzi njengamagama angundoqo kunye ne-backlinks..
Ngale ngcaciso, unokwenza isicwangciso kunye nokubuyisela xa ubona impumelelo okanye ukungaphumeleli kwemizamo yakho yokuthengisa.
3. Iingcatshulwa zegama lokuhlalutya igama elingundoqo
Ukuba unako ukulungelelanisa amagama angundoqo, kuthetha ukuba abathengi abafake imibuzo ngokuphathelele kwishishini lakho banokuthi bahanjiswe kumaphepha akho ewebhu.
Izixhobo zegama elingundoqo zikunika idatha malunga nokuba lixesha elide lifunwa kwiinjinjini ezahlukeneyo zophando. Unokuyichaza ulwazi kwaye unqume ukuba yeyiphi i-keywords eya kukunceda ibhishini lakho lenze ngcono kwimiphumo yosesho ye-organic.
4. Izixhobo zoPhuculo (Content)
Umxholo ubalulekile kwi-SEO yakho yokusebenza. Izixhobo zokusebenza ngokubaluleka zihlola umgangatho womxholo wakho ngokusekelwe kwizinto ezinokubaluleka, ukufundeka nokulungiswa kweenjini zokukhangela.
Ezi zixhobo zikunceda ekufumaneni imibono enomxholo kwaye udale isicwangciso soqulatho esiza kukhulisa idumela lakho kwiindawo ekujoliswe kuzo ngelixa ufikeleleka kwi-SEO yokusebenza ngokubanzi.
5. Izixhobo Zokususa Izixhobo
Nangona ungeke ube ne-disavow links, ukuba i-Google Penguin Algorithm ikugweba, uzakufuneka ususe ezinye ikhonkco. Oku kungathatha ixesha elininzi.
Unako ukususa iinqonkco ukuba zithintekile kukuhlaselwa kwe-SEO, okanye umxholo wakho unxulumene namanye amasayithi anokuchaphazela kakubi isimo sakho. Uya kuvuna ngokuhlala kwiincwadi zeGoogle ezilungileyo.
6. Izixhobo zokwakha izixhobo
Nangona i-Google ichasene nesakhiwo sekhonkco, sinokukunceda ukuma kwakho. Oku kungenxa yokuba iinqonkco ziphakathi kwezinto ezinokubangela ukuba udidi lweGoogle lunqume ukuba ingaba isayithi lakho linokuthenjwa okanye negunya malunga namagama athile okanye izihloko.
Ukuba wenza okulungileyo, uqhagamshelanisa isakhiwo kufuneka sibe nexabiso elikhulu kumabini omabini, omnye uyavuna umvuzo wequlatho yomgangatho ngelixa elinye liphakamisa ulwazi malunga nesayithi labo njengegunya kummandla othile.